dhinaca webiga ee
waxaa la joogaa waqtigii fankaagu iftiimi lahaa.
Waxaan ugu baaqeynaa fannaaniinta adiga oo kale ah inay hadiyaddaada la wadaagaan Columbus. Raadi fursaddaada si aad uga qayb qaadato Bandhigga Farshaxanka Columbus ee 60aad, oo ku yaal Degmada Arena sannadka 2022.
Baro wax badan oo ku saabsan sida looga qaybgalo Bandhigga Farshaxanka Columbus.
U beddel Degmada Arena galab qurux badan oo bannaanka ah sida farshaxanka garsoorka, Farshaxanka Weyn ee deegaanka ama farshaxan nool.
fannaaniinta soo bandhiga
Ku dar firfircoonaanta Bandhigga Farshaxanka Columbus adiga oo masraxa u qaadanaya muusikistaha, qoob -ka -ciyaarka, kooxda masraxa ama farshaxanka ereyga hadalka.
Miyaad wax ku abuurtaa karinta? La wadaag cunnadaada in ka badan 500,000 oo jecel farshaxanka gaajaysan.
Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa helno geeskayaga. Ku soo biir Bandhigga Farshaxanka Columbus waxaadna saamayn kartaa in ka badan nus milyan ka -qaybgaleyaal iyada oo loo marayo waayo -aragnimo noocyo kala duwan leh.
Bandhigga Farshaxanka Columbus wuxuu Furayaa Farshaxanka Farshaxanka iyo Codsiyada Iibiyaha Cuntada ee 2022 Festival
COLUMBUS, Ohio - Bandhigga Farshaxanka Columbus ee qaran ahaan loo caleemo saaray, oo ay soo bandhigtay Hay'adda Awoodda Korontada ee Mareykanka, ayaa hadda aqbalaysa codsiyada fanaaniinta iyo kuwa iibiya cuntada. Bandhigga sannadlaha ah ee 60-aad wuxuu dhici doonaa Juun 10-12,…
Bandhigga Farshaxanka Columbus wuxuu Bilaabay Website Cusub wuxuuna Furayaa Codsiyada Farshaxanka Muuqaalka ee 2022 Festival
COLUMBUS, Ohio - Bandhigga Farshaxanka Columbus ee qaran ahaan loo caleemo saaray, oo ay soo bandhigtay Hay'adda Awoodda Korontada ee Mareykanka, ayaa hadda aqbalaysa codsiyada farshaxanka muuqaalka ah. Bandhigga sannadlaha ah ee 60-aad wuxuu dhici doonaa Juun 10-12, 2022…
Golaha Farshaxanka Weyn ee Columbus ayaa laalay 2021 Bandhig Faneedkii Columbus; Ku dhawaaqaya Taariikhaha, Goobta Cusub ee 2022
COLUMBUS, Ohio — Golaha Farshaxanka Weyn ee Columbus (Golaha Farshaxanka) ayaa baajiyay Bandhig Faneedkii Columbus ee 2021. Dood dheer ka dib, Golaha Ammaanada ee Golaha Farshaxanka ayaa u codeeyay in la baajiyo Bandhig Faneedkii 2021 -ka iyada oo ay jirto welwel xagga caafimaadka dadweynaha ah…
Bandhigga Farshaxanka Columbus waxaa soo saaray The Greater Columbus Arts Council © 2021